Kupa kwehunyanzvi nehutsika kudzika munharaunda-yezvematongerwo enyika dzenyika - Afrikhepri Fondation
Mupiro wounyanzvi netsika kugadziriro yezvematongerwo enyika
LUku kucherechedza kuri pachena: nzanga dzevanhu dziri munyatwa uye kwese kwese kune kutaura kwekuvandudza budiriro, kunyangwe izwi rekuti kukwidziridzwa risingagari kushandiswa. Izvo zvine chokwadi ndechekuti isu tiri kutaura nezvedambudziko remagariro uye kutyisidzira kuri pedyo kupona kwevanhu.
Kuziva kwedu, hapana mugadziri achiri kukwira kundiro kuratidza nzira nenzira dzekuvaka patsva uku. Nekudaro, zvinoita sekunge, nekufungidzira, neizvozvo, isu tinoreva kuumba patsva iyo inoparadza libero-capitalist system tisingazive maitirwo azvo.
Uku kusava nechokwadi kwakapararira uye nemhedzisiro yekutya kufa inokwezva kune wese munhu, kunyangwe zvisikwa zvisina kusimukira zvatakafanirwa kuve.
Tatarisana nedambudziko rekutyisidzira, vekare vekoloni vane kodzero yekupa mupiro wavo: ndiani anoziva kunobva ruponeso?
Kana saka pasina zvivakwa zvatakaisa nezvazvo, isu tichati icho chikamu chehunyanzvi chiitiko mukuvakazve nzanga mu (chimiro) dambudziko rakakosha.
Kusimbisa chirevo chedu isu tichatanga kufambira mberi kuti zvinoratidzwa kuti nzanga yevanhu yakabuda muEast Africa nechitarisiko chebako remapako (mifananidzo yemapako pamadziro emapako epamberi).
Izvi zvakaguma nekuzvarwa kweMutauro uyo wakashanda sechimiro cheproto-nzanga. Ichi chishandiso chekutaurirana ndechekusika icho chakavezwa kwese kwaive iko kwekutanga kusikwa kwe "Vakavamba Madzibaba" avo vaive vatema ganda, shanduko uye kusiyaniswa kwemujaho usati wave kuitwa zvakadaro.
Iyi nharo yekutanga inoenderana nesangano chairo rakavakirwa pachimiro cheMutauro chakatangwa nehunyanzvi chiitiko chinotsigirwa neiyo (yekutanga) maitiro epfungwa-kurapa ayo anomisa kuti kugadzirwa kwemafomu epamberi anoumba Mutauro kunoda kudzora kwekufananidzira kwekushushikana. kubasa kuNyama.
Pasina kupokana, zvakatora chimiro chemunhu akasarudzika akatakura Shoko kusimudzira kugona kwekushuva kwemurume wechinyakare uye kubuda kwezvinhu zvemutauro: sine qua isiri yechiitiko chekusika chetsika tsika pakutanga kwekusimudzira mamask, kutamba, nhetembo, ngano vatangi etc.
Saka zvave zvichiratidzwa kuti hupenyu hwehupfumi hausi hwaro hwesangano renzanga.
Iyi inguva yekubvunza hudzvanyiriri hwehupfumi maererano nechero dambudziko remagariro rakadzika musangano rehupfumi uye kuti kuti uvakezve nzanga unofanirwa kushanda zvakanyanya kuti ubudise mari yakawanda.
Zvinoitika zve psychoanalysis uye psycho-therapy zvinotidzidzisa kuti dambudziko remamiriro azvino rine hwaro mukuparadza Mutauro pasi pekurwadzwazve kwevarwi vasina tsitsi kuti vatore, kurwa kunotidzorera kunguva yepamberi pehukama apo murume asina kurongeka akaendeswa kune zvishuwo zvekupona zvinounza kurwira kwevose kurwisa zvese zvinouraya kuhupenyu munharaunda.
Izvo zvakajeka kuti kuvaka nekudyidzana munharaunda kunoisa kudzoka kune kwekutanga mabasa enharaunda, ayo mabasa ehunyanzvi.
Tinofanira kukwazisa chirongwa che "Djaka Festival" naDivo naGeneral Commissioner wayo: Alexandre Drame Jhronix, nekufunga nezvenyaya iyi yakakosha yekuzvarwa patsva kwenzanga iri mumatambudziko. Muenzaniso wakanaka wekutevedzera.
Grobli Zirignon, Psychoanalyst uye psychotherapist
Vaccine theory inodonha: sainzi inoratidza kusakosha kwemasoja ekudzivirira nehutachiona
Mari munguva yenguva yemafarao - Omotunde
Psychart-kurapwa - Zirignon Grobli
Iri bhuku rekubuda, bhaibheri rekusafa
Epigenetics: chiratidzo chesainzi chekuti pfungwa dzinofurira chinhu